MADAXDA CUSUB EE SOOMAALIYA LOO DOORTAY WAA MID SIDEE AH?
Runtii ma jiro urur ka jira sooomaaliya oo aan wax gooni ah u rabay ama reer aan ka soo jeedo oo aan la jeclaa inay helaan qayb waafi ah oo wax ku ool ah, hadana waxaan aad u indho indheeyay
madaxda cusub ee soomaaliya inay u qalmaan magaca Ummada Soomaaliyeed marka laga eego dhanka kartida , aqoonta, sumcada,wadanimada, iyo maaraynta qaabka dawladeed.
Akhristaw anoo dhawraya waqtigaaga iyo kaygaba oo aan ku dheeraan arar iyo hordhac midna
waxaa ii soo baxay in raga soomaaliya maanta loo dhaariyay ha ahaadeen golo sharci (Baarlamaan) ama golo fulin (Golaha wasiirada) intooda badani aanay u qalmin inay huwadaan magaca iyo masuuliyada ummadda soomaaliyeed waayo?
Maanta aduunkan aan ku nool nahay wax yaalo badan baa magacoodii laga badalay oo wax yaalo aad u xun xun baa loo bixiyay magacyo aad u bilicsan oo hilaacaya waxyaalo aad u wanaagsanaana waxaa loo bixiyay magacyo aad u fool xun oo naftu ka dido ilaa ruuxu is dhahi karo kani ma aha caalamkii aad sanado ku so noolayd ee waxaad joogtaa koon iyo aduun kale.
Dadwaynaha soomaaliyeed baan soo dhex dhigayaaye ma ku haboon tahay in nin wadankeena
ku aasay sun khatar ah oo aafo dheer leh, isla markaana qaatay lacag adag loogu yeedho mudane somaaliyeed oo huwan magaceena?
Ma haboon tahay in wasaarad diineed loo dhiibo taliye maleeshiyo qabiileed oo dad badan gumaaday, kuwa uu gumaadayna ay u badan yahiin qabiilkiisu?
siday tahay hadii nin wadankeena daroogo ku abuuray loo dhiibo wasaarad muhiim ah?ama ku kale oo deegaano iyo dhul beeraad dad masaakiin ahi leeyahiin xoog ku haysta?
Ruux waliba isagaa u madax banaan aragtidiisa iyo fikirkiisa laakiin maxaa lagu daweeyaa hadii daawadu bukooto?
waxaan qabaa in mudanayaashan cusub iyo wasiiradan cusiba ay hafaryo ku yahiin Ummadda Somaaliyeed isla markaana aan leenahay Dad badan oo aqoon, dhaqan, iyo somalinimo intaba kaga fiican, in badan oo ka mid ah ragaan maanta is doortayna ay yahiin Rag galay danbiyo dagaal oo ka dhana dadka shacibka ah.
Ugu danbayntii ma ahi mid ilawsan baahida aan u qabno dawladnimo, mid ilawsan magaceenii laga waayay goloyaasha dawliga ah ee aduunka, dadkeena meel walba ku silcaaya iyo dumarkeena wadooyinka ku dhalay midna,ma ahi calooshii la cayaar qurba jooga oo iska hadaaqi rifanimana u dhashay laakiin waxaan qabaa inaan ragaani somaaliya meel la mahadiyo gaadhsiin doonin taariikhduna iayadaa is qorta oo wax walba cinwaankiisaa laga fahmaa.